19 Dzimwe nguva hana inogona kunyanya kutongesa munhu, ichiramba ichitambudza mutadzi kunyange pasina zvazvichamubatsira. Pakadaro tinofanira kuudza mwoyo wedu unenge uchitipa mhosva kuti Jehovha mukuru kupfuura manzwiro ose anoitwa nevanhu. Tinofanira kutenda uye kubvuma kuti ane rudo uye anokanganwira, sezvatinokurudzira vamwe kuti vaite. (Verenga 1 Johani 3:19, 20.) Ukuwo hana yakachena inoita kuti tidekare, tive norunyararo, uye mufaro wakakura usingawanzowaniki munyika ino. Vakawanda vakamboita zvivi zvakakura vakawana zororo rakadaro uye nhasi vane hana yakanaka sezvavanoshumira Jehovha Mwari.​—1 VaKorinde 6:11.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ungaramba Sei Uine Hana Yakanaka?